Xukuumadda Masar oo danaynaysa mashaariic ay ka hirgelineysa Soomaaliya – Radio Daljir
Xukuumadda Masar oo danaynaysa mashaariic ay ka hirgelineysa Soomaaliya
Agoosto 18, 2015 8:54 b 0
Dowladda Masar ayaa shaaca ka qaadday,in dhawaan ay dalka Somaliya ka hirgelin doonto Mashaariic lagu horumarinayo dalkeenna, iyadoo dhanka kalena sheegtay inay ka qeyb qaadaneyso Hannaanka lagu nabadeynayo waddanka Somaliya.
aamax Shukri oo ah Wasiirka Arrimaha Dibedda ee dalka Masar, ayaa sheegay in Dowladdiisu ay ka fekereyso hannaankii ay uga qeyb qaadan laheyd dib usoo celinta nabadda Somaliya, waxa uuna cadeeyay in Hanaan kaasi uu barbar socdo mid dib u dhis loogu sameynaayo Xarumihii ay Dowladdiisu ku laheyd dalka Somalia.
Saamax Shukri ayaa hadalkaasi sheegay xilli uu xafiiskiisa ku qaabbilay wafdi ka socday DF Somaliya oo howlo shaqo u gaaray Magaalada Qaahira ee Caasumadda dalka Masar.
Saamax Shukri waxa kale oo uu sheegay in qorshaha Masar ay kamid tahay dib u habeynta Dugsiga Jamaal C/naasir oo noqon doono Minaaradda ama Taawarka Waxbarasho ee ay Masaarida ka fuliyaan gudaha dalka Somalia.
“Masar waxay taageero buuxda la garab taagan tahay Dowladda Federaalka Somaliya, dedaalka ay ugu jirto Xaqiijinta Horumarinta siyaasadda Dastuurka iyo dhanka waxbarashada waa mid socon doona” ayuu yiri wasiirku.
Waxa uu sidoo kale sheegay, in ay taageero ka geysan doonaan Hiigsiga cusub ee Somaliya ee sanadka soo socda 2016-ka, si loo dhamaystiro Dastuurka iyo in la qabto Doorashada Barlamaanka Somaliya.
Saamax Shukr,waxa uu carabka ku adkeeyey inay Dowladda iyo Shacabka Somaliyeed ka taageeri doonaan Maal gashiga iyo la dagaallanka waxa uu ugu yeeray Argagixisadda.
Masar ayaa haatan ka hor u soo dirtay Soomaaliya quburo xagga ciidamada,beeraha,kalluunka iyo xoolaha ah,si ay u soo celiso xiriirka qotoda dheer ee ay kal hore la lahayd Soomaaliya.
Xigasho Sooyaal PP